Report: Mugabe calls top US official &apos;an idiot&apos; - The San Diego Union-Tribune
Report: Mugabe calls top US official 'an idiot'
FILE -- In this Wednesday, Sept. 24, file photo, Zimbabwe's President Robert Mugabe is interviewed during the 63rd session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters. President Robert Mugabe described the U.S. assistant secretary of state for African affairs as "an idiot" after an acrimonious meeting between the two at an African summit in Libya, Zimbabwe's state media reported Monday, July 6, 2009, The state Herald newspaper carried the remarks after a briefing Mugabe gave to Zimbabwean reporters at the end of last week's summit of the continentwide African Union. U.S. Embassy officials in Zimbabwe and Ethiopia, where Assistant Secretary of State Johnnie Carson is visiting, would not comment on the remarks. (AP Photo/Seth Wenig/file)
FILE -- In this Wednesday, Sept. 24, file photo, Zimbabwe's President Robert Mugabe is interviewed during the 63rd session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters. President Robert Mugabe described the U.S. assistant secretary of state for African affairs as "an idiot" after an acrimonious meeting between the two at an African summit in Libya, Zimbabwe's state media reported Monday, July 6, 2009, The state Herald newspaper carried the remarks after a briefing Mugabe gave to Zimbabwean reporters at the end of last week's summit of the continentwide African Union. U.S. Embassy officials in Zimbabwe and Ethiopia, where Assistant Secretary of State Johnnie Carson is visiting, would not comment on the remarks. (AP Photo/Seth Wenig/file) (/ AP)
President Robert Mugabe described the U.S. assistant secretary of state for African affairs as "an idiot" after an acrimonious meeting between the two at an African summit in Libya, Zimbabwe's state media reported Monday.